Waa maxay waqtiga juqraafi ahaan iyo sidee loo cabiraa | Saadaasha Shabakadda
Marar badan ayaad akhriday qoraaladayda muujinta "Waqtiga Joolojiga". Miisaanka aan u baranay inaan ku shaqeyno looma isticmaali karo in looga hadlo juquraafiga iyo isbadalka Dunida ama koonka. Maskaxda ku hay in miisaanka aadanaha ee aan sida caadiga ah uga shaqeyno uu yahay qiyaastii 100 sano qofkiiba. Si kastaba ha noqotee, waqtiga micnaheedu maahan geeddi-socodka juqraafiyeed. Taasi waa meesha ay tahay inaan ka hadalno waqtiga juqraafiga.
Daraasadda dhulku waxay u baahan tahay inay yeelato baaxad weyn oo ay ku soo koobi karto dhammaan geeddi-socodka juqraafi ahaan sidii ay dhab ahaan ugu dhacday. Sidaa darteed, maanta waxaan ka hadli doonnaa waqtiga juqraafiyeed. Ma dooneysaa inaad ogaato sida cilmiga cilmiga dhulka ay taariikh iyo taariikh ugu yeelato dhacdooyinka cilmiga dhulka.
1 Qeexida waqtiga juqraafiyeed
2 Dhacdooyinka miisaanka iyo cilmiga dhulka
3 Qaybaha cilmiga dhulka
Qeexida waqtiga juqraafiyeed
Si loo cadaadiyo dhamaan macluumaadka juqraafiyeed waxaan u adeegsaneynaa waqtigan juqraafiyeed. Markaan ka hadlayno, tusaale ahaan, samaynta dhagxaanta dhagxaanta leh, waxaan kahadalnaa isku duwidda qalabka xoog cadaadis. Tababarkani kuma dhacayo maalmo, toddobaadyo, ama bilo. Waa badan tahay, 100 sano kuma dhacdo. Geedi socodka sameynta dhagxaanta sida dhagaxa ciida wuxuu qaataa kumanaan sano. Bani-aadamku xitaa ma ahan il-biriqsi yar oo taariikhda juquraafiga ah ee Dunida.
Si loo soo bandhigo dhammaan geeddi-socodka juqraafiyeed ee miisaan aan ku shaqeyn karno, waxaan adeegsannaa Aeons, Da'da Jiolojiga, xilliyada iyo xilliyadii hore. Si ka duwan waqtiga caadiga ah ee aan u baranay inaan ku shaqeyno, waqtiga juquraafi ahaan ma laha waqti go'an. Tani waa sababta oo ah waxaa jira fiditaanno taariikhda dhulka ah halkaas oo ay ka dhaceen dhacdooyin muhiim ah. Dhacdooyinkan waxaa lagu soo koobay lsameynta buurta, nabaad guurka, baabi'inta tirada badan, iwm
Astaamahan iyo tilmaamahan oo dhan, waxaan ku qeexi karnaa waqtiga juqraafiyeed inuu yahay muddada waqtiga u dhexeysa aasaaska iyo horumarka Dhulka (qiyaastii 4,5 bilyan oo sano ka hor) illaa hadda. Marka la soo koobo, waxay u egtahay inay tahay kalandarka Dunida.
Dhacdooyinka miisaanka iyo cilmiga dhulka
Qiyaasta waqtigaan waxaa si weyn u adeegsada aqoonyahanada cilmiga dhulka iyo saynisyahano kale Thanks iyada, Waxay u xilsaari karaan waqti iyo taariikhi dhacdooyinka ugu muhiimsan Dunida. Dhagaxyada dhexdooda ayaa ah halka aad ka heli doontid macluumaad dheeri ah oo ku saabsan waxa ka dhacay dhulkeenna muddadaas dhan 4,5 bilyan.
Ilaa qarnigii XNUMXaad, Dunida waxaa loo haystay inay jirto dhowr kun oo sano oo keliya. Aqoonta dhulka ee runta ah waxay la timid daahfurka shucaaca by Marie Curie qarnigii XNUMXaad. Tan awgeed, waxaa suurtagal noqotay in taariikhda lagu qoro dhagaxyada qolofta dhulka iyo meteorites-ka soo dhacaya.
Haddii aan rabno inaan ka hadalno waqtiga juqraafiyeed, ma isticmaali karno halbeegyo waqti sida tobannaan ama qarniyo. Habka ugu faa iidada badan ayaa ah in waqtiga loogu qaybiyo dhacdooyin waaweyn oo dhul ahaaneed. Marka la soo koobo, waxay ku saabsan tahay isbeddelada waaweyn ee ku dhacay dhagxaanta iyo noolaha tan iyo asal ahaan meeraheenna.
Qaybaha cilmiga dhulka
Waqtiga juqraafiga, qeybta ugu weyn ee waqtiga la isticmaalo waa eon. Eon-kan ayaa loo qaybiyaa waayihii, xilliyadii, xilliyadii, iyo heerar. Taariikhda Dunida oo dhami waxay u qaybsan tahay laba Da ’weyn oo waqtiga ah. Midka koowaad waa Precambrian, oo ah halka uu dhulku ka sameysmay qiyaastii 4,5 bilyan oo sano ka hor. Waxay dhammaatay qiyaastii 570 milyan oo sano ka hor. Waxaan hadda ku jirnaa Phanerozoic Aeon. Labadan eon waa kuwo aad u waaweyn, markaa waxaan u baahanahay jaangooyooyin yaryar.
Waxaan si qoto dheer u baran doonnaa cutub kasta oo ka mid ah cabbirka waqtiga juqraafiyeed:
Waa midda ugu weyn dhammaan waqtiga. Waxaa lagu cabiraa 1.000 bilyan oo sano. Marinka laga soo bilaabo Precambrian ee loo yaqaan 'Phanerozoic' wuxuu ku dhacaa kala-goynta is-weydaarsiga weyn ee loo yaqaan 'Pannotia'. Phanerozoic macnaheedu waa "nolol muuqata." Nolol baa jirtay ka hor bilowga eonkan, laakiin waa halka ay ku kala adag yihiin oo ay ku xeel dheer yihiin.
Xilligu maahan unug sax ah. Waxay isku ururisaa isbeddelo muhiim ah oo xagga cilmiga dhulka ama bayoolojiga ah oo meerahu ku dhacay tan iyo markii la aasaasay. Xilli kasta wuxuu ku bilaabmaa dhacdo muhiim ah. Tusaale ahaan, Mesozoic wuxuu ku bilaabmaa muuqaalka shimbiraha ugu horreeya iyo naasleyda.
Da'da waqtiga juquraafiga waa: Azoic, Archaic, Proterozoic, Paleozoic (nolosha hore), Mesozoic (nolosha dhexe), iyo Cenozoic (nolosha dhaweyd). Maaddaama xilliyadu ay aad u ballaadhan yihiin waqtiga, kala qaybsanaanta waxay u baahan yihiin in la yareeyo saxnaan dheeri ah.
Waxay ku saabsan tahay qeybinta waayihii. Muddo kastaa waxay astaan ​​u tahay dhacdo jioloji ama muuqaalka noole u adeega astaan ​​ahaan. Tusaale ahaan, xilligii Cambrian qaaradda weyn ee loo yaqaan Pangea way kala go'daa.
Xilligu waa kala qaybsanaanta muddada. Dhacdooyin kasta oo taariikh ahaaneed oo jir ahaaneed waxaa lagu duubay qiyaas yar. Tusaale ahaan, Paleocene-ka ayaa jira kala goynta Yurub iyo Waqooyiga Ameerika. In kasta oo khariidado badan oo wakhtiga juqraafiga ah markii ugu dambaysay ee la qoray ay tahay Holocene, haddana Dhulku hore ayuu u dhaafay. Hadda waxaan ku suganahay Anthropocene. Waa waagii ugu horreeyay ee lagu qeexo ficilka aadanaha.
Waxaan muran ku jirin in bini aadamku cawaaqib xumo weyn ku yeeshay Dunida. Iskusoo wada duuboo, laga soo bilaabo kacaankii warshadaha ilaa maanta, isbadalka meeraha ayaa guud ahaan ahaa. Nidaamyada deegaanka ee dabiiciga ah ee aadanuhu wax ka beddelin ayaa ku yar. Aadamuhu wuxuu awood u yeeshay inuu galo oo qaabeeyo dhulka ku dhowaad gees kasta oo meeraha ah.
Isbeddelada waaweyn ee heer caalami ah sida isbeddelka cimilada waxaa sababa qiiqa hawada lagu sii daayo ee ka imanaya hawlaheenna. Sida lakabka ozone, oo xasilloonaa, waxaan ku guuleysannay inaan ku soo dejinno tobanaan sano. Waxaan ka hadlaynaa horumar jibbaar ah oo dhacay 300 oo sano oo keliya. Tirada dadka adduunka sanadkii 1750 ma aysan gaarin hal bilyan oo qof. Si kastaba ha noqotee, maanta, waxaan ka badanahay 7,5 bilyan. Waxaa la filayaa in sanadka 2050 aan noqon doono ku dhowaad 10 bilyan.
Sidaad arki karto, miisaanka juquraafiyeed ayaa aad muhiim ugu ah in taariikhda la galiyo fosfillada iyo in si fiican loo fahmo asalka dhulkeenna. Adiguna, ma ogeyd waqtiga jiyooloji?
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Ciencia » Waa maxay waqtiga juqraafiyeed iyo sidee loo cabiraa?
Kala-soocida dhulka dunidu waa mid horeyba ugu jirtay qof walba iyo qof walba!
Jawaab FERNANDO GRANADOS GUZMAN
Waxaan dhowaan maqlay faallooyinka telefishanka oo aan doonayo inaan weyddiisto inaan sameeyo baaritaan dheeri ah. Waxaan maqlay inuu jiro xiriir udhaxeeya inta jeer ee mowjadaha maskaxda iyo aragtida shakhsiga ee waqtiga aadanaha oo isbadal kadhaca dhaqdhaaqa dhaq dhaqaaqa Dunida, ma aqaano inay tahay "nafaqo" ama dhaqdhaqaaq kale oo ah oscillation ulaha, ama haddii ay ahayd wax "magnetic" ah meeraheenna.
Su'aasha aan jeclaan lahaa inaan cadeeyo waxay tahay muuqaalka jir, dhaqdhaqaaq ama magnetic ee dhulkeenu yeelan karaa xiriirkan iyadoo la dareemayo in waqtigu si dhakhso leh u gudbo. MAHADSANID horay.
Jawaab Marta Rodriguez
Sawirka ugu horreeya ee kala qaybiya waqtiyada juqraafiyeed adiga ayaa iska leh, haddii ay sidaas tahay, sannadkee baa shaqadan la daabacay?
Jawaab Pedro Sibaja